မြန်မာကို အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာပေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်ယူဖို့ မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက် နေတဲ့ အာဆီယံ လွှတ်တော် အမတ်များ အဖွဲ့ AIPMC က ပြောပါတယ်။
ပွင့်လင်းလာတယ် ဆိုတိုင်း ဒီမိုကရေစီ အလိုအလျောက် ရနေပြီလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ မရဘူးဆိုတာ သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ စဉ်းစားစရာအချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကို အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေ ထည့်မတွက်ဘူးလို့ Eva Sundari ပြောပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတွေ အခြေအနေ ကောင်းတွေဆိုတာက ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မြို့တော်သစ်ဆိုတဲ့ နေပြည်တော်မှာပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ။ နောက်ပြီး ထောင်နဲ့ချီတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရဆဲပါ။
သူတို့အားလုံးကို ဘယ်တော့များမှ တခါတည်းနဲ့ လွှတ်မလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆိုရင် သဘောထား ကွဲလွဲသူတွေကို အကျဉ်းချထားတယ်ဆိုတာ မသင့်တော်ပါဘူးလို့ Eva Sundari က ဆက်ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာ့အရေး AIPMC ဆွေးနွေးမည်
သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ AIPMC နဲ့ တွေ့ဆုံမည်
Nothing ...Do u know ?? U can supporting of ur around of u ...??? Like ur family is now complete & all r okey ..???
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ပြည်တွင်းမှာတောင်
အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံထက် တိုးတက်
တဲ့ နိုင်ငံချည်းပဲ... ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုးတက်အောင်
လုပ်ပါအုံ့ ..အာဆီယံမှာနိုင်ငံက လူတွေက အကုန်
ဘွဲ့ လွန်ပြီးကြပြီ .. ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက အခုမှ
Nov 09, 2011 07:25 AM
You can't beat the AAEAN, which is already made up their mind to lat Myanmar Assume Chairmanship. The visit of Indonesia F M is just for show. To prove (By their Own Accord), that they have done all they can & due deligently.
Nov 08, 2011 07:34 PM